Leicester City oo ka reysatay Ranieri saddex goolna ku dhufatay Liverpool (Daawo goolashii ciyaarta) – Gool FM
(Leicester), 28 Feb 2017 –Ciyaar aad u xiiso badneyd oo ka tirsanayd kulammadii 26′ ee Horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa caawa garoonka ‘King Power Stadium’ ay ku dhex martay kooxaha Leicester City iyo Liverpool, waxaase 3-1 lagu legday kooxda Liverpool.
Leicester oo Serie B ama Championship ka carar ahayd ayaa cashir u dhigtay Liverpool, waxaana goolka 1′ u dhaliyay ciyaaryahan Jamie Vardy daqiiqaddii 28′, iyadoo Danny Drinkwater uu u raaciyay goolkii 2′ daqiiqaddii 39′ halka isla Jamie Vardy uu goolkii guusha ee 3′ u saxiixay naadigiisa daqiiqaddii 60′.
Goolkii 1′ ee Vardy kulankan ayaa noqonaya midkiisii ugu horreeyay ee uu Leicester u dhaliyo 2017 kaddib markii uu gool la’aan ahaa muddo 637 daqiiqadood ah.
Gool daciif ah oo Soomaalidu ugu yeerto ‘goolka calanka’ ayay Liverpool heshay daqiiqaddii 68′ waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Philippe Coutinho.
Guushan Leicester ayaa ku soo aadaysaa maalmo yar kaddib markii kooxdu iska ceyrisay macallinkii u qaaday Horyaalkoodii ugu horreeyay Ingiriiska ee Claudio Ranieri iyadoo kooxdu natiijo wacan la timid, waxaana ay ka soo boodday kaalinta 3′ ee xagga hoose iyadoo timid kaalinta 15′ ee kala sarreynta heysatana 24 dhibcood, halka Liverpool ku jirto kaalinta 5′ iyadoo leh 49 dhibcood.
WAR CUSUB: Goorma ayuu dhici doonaa shirka jaraa'id ee ay qaban doonaan milkiilayaasha cusub ee AC Milan?
Freddie Ljungberg oo ka tagay Arsenal